GUYYAA YAADANNOO Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii
GUYYAA YAADANNOO Lubbuun Darbuu Jaallee Mallas Zeenaawii Featured
Waggaa sadan har'aa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif gaggeessaa ishee jaalattu tasa du'aan dhabuun ishee ni yaadatama. Waggoottan digdamii tokkoof Itoophiyaa gahumsaafi bilchiina olaanaan gaggeessaa kan turan Ministirri Muumee biyyattii duraanii Jaallee Mallas Zeenaawwii waggaa 57ffaa isaaniitti du'aan addunyaa kanarraa boqatan.
Obbo Mallas dhibamanii biyya alaatti erga waldhaanamanii booda Hagayya 14/2004 Wiixataa galgala sa'aatii 5:40 irratti ture turtiisaanii addunyaa kanaa kan xumuran. Jaallee Mallas Zeenaawwii Caamsaa 1 bara 1947 bulchinsaa mootummaa naannoo Tigraay bakka Aduwaa jedhamutti abbaa isaanii Obbo Zenaawwi Asrassiifi haadha isaanii Alamnash Gabra Li'ulirraa dhalatan. Maatii isaanitiif Ilma sadaffaa turan.
Barumsa isaaniis Sadarkaa 1ffaafi sadarkaa 2ffaa bakka dhaloota isaanii Aduwaatti xumuruudhaan umurii dargaggummaa isaanii irraa eegalanii barumsa isaanitiin hedduu cimaa waan turaniif Yunivarsiitii Finfineetti barnoota oggummaa fayyaa hordofuuf carraa argatanii turan.
Yeroon sun yeroo qabsoon ummattoota Itiyoophiyaa sirna cunqursaa sukkanneessaa mootii Hayla Sillaasee fonqolchuudhaaf qabsoon finiinee turetti dandeettiifi gahumsa isaanitiin adda durummaadhaan fakkeenyummaan qabsaa'aa kan turan Mallas Zeenaawwii barumsa isaanii addaan kutanii gaaffileen mirgoota demookrasiifi namoomaa ummattootaa biyyasaanii qabatanii bara 1967 Adda Bilisummaa Ummata Tigrayitti (ABUT) makamanii sirna Dargii wayita sanatti qabsoo ummattoota Itiyoophiyaan ukkaamsee tureen falmuudhaan kutannoofi fakkeenyummaa isaanitiin itti fufan.
Yeroo muraasa keessatti kaayyoo aantuummaa ummattummaa qabatanii adda duree ta'anii jalqabarratti miseensa koree giddu galeesaaa, itti aansuun ammoo koree hojii raawwachiiftuu ABUT ta'uudhaan filatamaniru. Achiin boodas gahumsaafi bilchina gaggeessuummaa isaanitiin kaayyoo warraaqsa dimookrasii ummattoota Itiyoophiyaa adda durummaadhaan hogganuudhaan qabsoo sirna abbaa irree Dargiirratti Fininee Caamsaa 20/1983 fiixaan ba'e keessatti shoorri isaanii olaanaa ture.
Kufaatii Dargiitiin boodas pirezidaantii mootummaa ce'umsaa ta'uudhan hojjetan. Sirna paartilee hedduu biyya keenya keessatti ijaaran. Itiyoophiyaafi ummattootashee hiyyummaafi boodatti haftuummaa keessaa baasuuf dadhabbiifi ifannaa tokko malee amanamummaafi aantuummaa dhaan waggoota 21f ummataafi biyya tajaajilaniiru.
Jaallee Mallas bara hogganumma isaanii keessatti imaammatawwaniifi tarsiimoowwan biyyattii halayyaa hiyyummaa keessaa baasuun toora biyyoota guddataniirra hiriirsuun akkasumas, jireenya lammilee jijjiiru diriirsuun hojiirra oolmaa isaatiif of kennanii hojjetaa turaniiru. Kana qofa osoo hintaane walqixxummaan sabaa, amantii, afaaniifi saalaa akka mirkanaa'uuf kallattii jijjiirama bu'urraa argamsiise lafa kaa'anii darbaniiru. dabalataanis tarsimoon qonnaa diriirsan jireenya qonnaan bultoota miliyoonoota jijjiireera.
Kanneen malee Jaalleen Mallas hojii Itoophiyaanoonniifi namoonni addunyaa hedduu hindaganne, seenaa biyyattii hundeedhaa jijjiiruu danda'u hojjetanii darbaniiru. Lagni Abbayyaa waggoota hedduuf biyyoo gabbataa biyyattii biyya ormaaf geessaa ture hidhamuun ofiifis bakka bultii argatee, biyyaafi ummatallee akka fayyaduuf dhakaa bu'uura ka'aniiru.
Wayita dhagaan bu'uuraa hidhichaa taa'ees ummata onnachiisuun waggoota shan keessatti xumuramee jireenya lammilee akka jijjiru waadaa seenanii turan. Ta'us akka isaan jedhan Waaqni waan hinjenneef xumuramuu hidhichaafi bu'aa isaa utuu hindhandamatiin addunyaa kanarraa darbaniiru.
Erga boqotanii waggoota sadii kan lakkoofsiisan Ministirri Muummee duraanii Mallas Zeenaawii yaadannoon guyyaa wareegamasaanii haala addaddaatiin kabajamaa jira. Biiroon Dhimma Dubartoota, Daa'immaniifi Dargaggootaa Finfinnee Sanbata darbe galma Aadaafi Tiyaatiraa Finfinneetti dhaadannoo “Jechi kee kabajameera, diina keenya hiyyuummaa injifachaa jirra!” jedhuun marii paanaalii qopheessee ture. Mariicharratti caasaaleen dubartootaa magaalattii hojiilee Jaallee Mallas fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojjetan kaasuun, haala itti fufiinsa isaanii dhugoomsurratti bal'inaan mari'ataniiru. Ergamni isaanii fiixaan akka ba'uufis sassaabdummaa kiraarratti duuluun murteessaa akka ta'e waliigaltee irra ga'aniiru.
Pirezdaantiin Fedeereshinii Dubartoota Finfinnee Aadde Wuubit Taayyee sirnicharratti akka jedhanitti, dubartoonni cunqursaa sukkanneessaa baroota hedduuf keessa turan keessaa ba'uun, barataniifi hojjetanii biyya isaanii akka guddisaniif Jaalleen Mallas shoora olaanaa gumaachaniiru. Daandii isaan eegalanii darban kana itti fufsiisuufis hojii bal'aan hojjetamaa tureera, fuuldurattis kan itti fufu ta'a. Hojii fuulduratti hojjetamu garuu fiixaan kan bahu garuu hundumtu miira tokkoon sassabdummaa kiraarratti yoo duuluu danda'edha jedhu.
Qabsooftuu Tsahaayituu Baahitaa gama isaaniitiin, erga Obbo Mallas du'anii booda hojiilee gama fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuutiin itti fufsiisuuf waadaa yeroo du'a isaanii seenanii turan hojiitti hiikuuf waan isaanirraa eegamu ba'aataa turuu isaanii eeranii, ammas hojiilee misoomaa eegalamanii hinxumuramiin jiran fiixaan baasuuf kuteenyummaadhaan socho'aa akka jiran himu.
Hojiileen kunniin garuu fiixaan ba'uu kan danda'an sassaabadummaa kiraafi hojimaata badaarraa bilisa ta'ee horachuun yoo danda'ame waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamuu akka malu eeru.
Guyyaan yaadannoo jaallee Mallas Zeenawii kun qophiilee gara garaan naannoleefi bulchiinsota magaalaa Finfinneefi Dirree Dawaatti dammaqinaan yaadatamaa jira. Guyyaa kana sababeeffachuun magaalaa Finfinneetti kaleessa waaree booda sirni dongoo bobeessuu Istaadiyooma Finfinneetti gaggeeffameera.
Torban kana/This_Week 632
Guyyaa mara/All_Days 1638227